Dhokumenti Fashiliyay Dhaqaale Dhexmaray Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland iyo Guddoomiyaha Bangiga Djibouti | hubaalnewspaper
Dhokumenti Fashiliyay Dhaqaale Dhexmaray Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland iyo Guddoomiyaha Bangiga Djibouti
Warbixin kamid ah Xoggihii Anonymous oo Daaha ka Rogtay Boqolaal Kun oo Dollar oo Jaamac Xayd u soo diray Cabdiraxmaan-cirro
“Account khalad ah ayaad haysataa, haddaad Samada tagto waxba kama jiraan, dhaqdhaqaaqiisa waxaa iigu dambaysay intii aanan baarlamaanka soo gelin”
Su’aal: Wakhtigaa Golihiina waxa ka socday Ansixintii Xeerkii Isgaadhsiinta, ma la odhan karaa SOMCABLE ayaa lala xidhiidhin karaa arrintaa ka waran iyada?
Hargeysa(Hubaal) – Dhukumenti kamid ah xoggihii ay kooxda Anonymous ka xadday xawaaladda Dahabshiil ayaa hoosta ka xariiqay lacag ka badan $300 oo guddoomiyaha golaha wakiillada Somaliland ka helay guddoomiyaha baanka Djibouti.
Halkan Guji si aad u Akhrisato warqadda warbixinta Accounta Cabdiraxamaan Cirro
Dhukumentigan oo kamid ah in ka badan hal malyan oo fayl oo shirkadda laga jabsaday ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq xisaabeed oo gudoomiyaha baanka Djibouti Md. Jaamac Maxamuud Xayd kusoo shubay Sanduuq Xisaabeed (Account) uu ku qoran yahay Magaca guddoomiyaha golaha wakiillada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), lacagtaas oo wadarteedu tahay $320 kun.
Account-kan oo Sumaddiisu tahay Dahabshiil Bank HRGD5299 ayaa la sameeyay 29/1/2010, sida ku cad warqada Waxbixinta Statement-ka ee sanduuqan, waxaana kamuuqa toddoba jeer oo shan kamid ah uu ku qoran yahay Jaamac Xayd la dhigay lacagtan.
Dhukumentigan oo lagu baahiyay qaar kamid ah baraha internetka ee Soomaalida ayaa waxa ku duugan in Guddoomiyaha baanka Jibouti Jaamac Maxamuud Xayd iyo gabadh kale oo lagu Magacaabay Dahabo Xasan ay lacagtan dhawr jeer oo is xiga u dhexeeyey bilahii March ilaa August ee 2011 u soo xawileen Guddoomiyaha Wakiillada ahna Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka WADANI Md. Cabdiraxmaan Cirro.
Faahfaahin kale laguma sheegin warqada hase yeeshee waxa ku qoran oo ciwaanka accountka lagala xidhiidhayo ku qoran Magaca shirkadda dhismaha ee Alkhayr, Hase yeeshee gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdiraxmaan Cirro oo wargeyska Hubaal wax ka weydiiyay jiritaanka sanduuq xisaabeedkan ayaa iska fogeeyay lahaanshihiisa isaga oo ku tilmaamay mid been ah.
Cabdiraxmaan Cirro oo xalay khadka telefoonka ugu warramay wargeyska Hubaal ayaa sheegay inaanu Accountkaasi iyo lacagta loo soo diray toona. ““Account-kaas ma hubo, maba xasuusto hadduu jirana wax dhaqdhaqaaq ah muu samaynin” ayuu yidhi gudoomiyuhu waxaanu sheegay inaanay haba yaraatee jirn wax shirkad ah oo uu masuul ka yahay hadda intii uu baarlamaanka ku jiray “Aniguna masuul kama ihi oo waxa iigu dambaysay intaanan baarlamaanka soo gelin, wax dhaqdhaqaaq ah oo aan ka ogahayna ma jirto Totally, mid kale (account) ayaan Dahabshiil ku leeyahay laakiin kaas aad sheegayso maaha” ayuu yidhi Cirro..
S: Ma jirtaa Lacag Jabuuti kaaga timi oo Gudoomiyaha Baanka Jabuuti kuu soo diray?
J: Ma jirto account-kaasna hadday shirkadi ku qorayn tahay dhaqdhaqaaqiisa waxaa iigu dambaysay 2005tii, intii aanan baarlamaanka soo gelin.
S: tan la faafiyay iyadu waa kal hore, wakhtigaa golihiina waxa ka socday ansixintii xeerkii isgaadhsiinta, tusaale ahaan Somcable ayaa lala xidhiidhin karaa, arrintaa ka waran iyada?.
J: taas waxba kama jiraan ee account khalad ah ayaad haysataa, haddaad Dahabshiil tagto iyo haddaad Samad tagto-ba account-kaas iyo shirkadaas iyo wax aan shaqo ku leeyahay ma jirto, .
S: laakiin shirkadda alkhayr mid jirta ma tahay,?.
J: Mayee ma jirto, waa la frees gareeyay wakhtigaa oo 2008-dii baa la fadhiisiyay. Waxa jirtay mar aan masuul ka ahaa Laakiin arrintani waa sannadkii 2011-kii oo bilihii March ilaa July intii u dhaxaysay dhaq-dhaqaaqu weeye shirkad baa jiri jirtay laakiin mid Khaas ah oo Dahabshiil aan ku leeyahay wuu jiraa, taas wixii aad iga weydiisana waan kaaga jawaabayaa.
Waa Masuulkii u Horeeyay ee ka tirsan dawladda Somaliland ee lagu dhex arko Macluumaadka Dahabshiil ee la jabsaday, iyada oo madaxda qaranka badankoodu hantida dhigtaan shirkadda Dahabshiil.
Dhinaca Maalmihii u dambeeyay waxa goobaha barkulanka ah ay ra’yul-caamka bulshadu ku qaadaa dhigayeen Budhcad dhinaca internet-ka ah oo shabakad ay leeyihiin ku baahiyay macluumaad ay ka xadeen Xudunta Xawaaladda weyn ee Dahabshiil, kaas oo ay ka mid yihiin sanaadiiqda xisaabaadka ee dadka macaamiisha u ah Dahabshiil.
kale Kooxdan Garanwaaga ah oo isku magacowday Anonymous (Garanwaa) waxay baahinta macluumaadkoodan ugu hanjabeen shirkadda Dahabshiil inay burburin doonaan dhammaan nidaamka xisaabaadka iyo xawaaladda shirkadda haddii ay qiran waydo inay gacan siisay kooxaha argagixisada ah ee Soomaalida.
Sidoo kale kooxdani waxay ku sheegteen qoraalkooda inay imikaba jabiyeen xogta mishiinka (Database Server) Dahabshiil isla markaana ay gacanta ku hayaan in ka badan hal malyuun oo macaamiisha Dahabshiil ah xogtooda, lana wareegi karaan daqiiqad kasta.
Haddaba maxay yihiin kooxdani, warbaahinta duniduse maxay ka qortay?.
Shuftadan waxaa la aas-aasay sannadkii 2003-dii, waa koox aan cid garanaysaa jirin, waxay ka hawl-galaan shanta qaaradood ee dunida, waxay ka kooban tahay ugu yaraan toban qaybood oo kala duwan oo hoos yimaadda qof sheegta magaca Commander X, kaasoo sheegay in ay neceb yihiin argagaxisada balse ay dagaal ka ballaadhan ka reer galbeedka kula jiraan kooxaha xagjirka ah. waxay hore u jabsadeen in ka badan toban kun oo shirkadood ay kamid yihiin baanan iyo goobo Nuclear-ka caalamka ah sida xarunta gaashaandhiga Pentagon-ka, xarunta Kombuyuutarrada Wasaaradda caddaaladda Marayanka oo ay kala baxeen macluumaadyo ku saabsan siyaasadda USA uga dejisan argagaxisada iyo qaabka uu ula dhaqmo maxaabiista Guantamo.
Waxa kale oo burburiyeen Server-radii ay ku shaqaynayeen baanan iyo xawaaladdo ka hawl-gala bariga dhexe sida shirkaddaha Paypal, Mastercard, Visa, News of the World, FOXNEWS iyo qaar kale oo badan.
Barnaamijka Nuclearka ee dalka Iran ayaa isagana la sheegay inay mar duqeeyeen iyagoo khal-khaliyey Kombuyuuterrada ka shaqeeya dardar gelinta barnaamijka Uranium-ta ee Iran.
Sannadkii 2010-kii ayey kooxdani dhulka la simeen Serverkii xambaarayey macluumaadka dawladda Maraykanku isu gudbiso,waqtigaas oo Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi shaacisay in weerar adag oo dhinaca internet-ka ahi la soo dersay kadib markii uu joogsaday qamar sanaacigii hagayey.
Weerarkii u Horeeyay ee Anonymous ku qaadaan Shirkad Soomaali leedahay
Shirkadda Dahabshiil ayaa noqonaysa tii u horaysay ee laga leeyahay dhulka Afka Somaaliga lagaga hadlo ee shuftadda Anonymous weerar ku qaado iyagoo u daliishanaya sida ay ku doodeen dagaal ka dhan ah kooxaha Argagaxisada gacan siiya.
Hayeyayasha Dahabshiil ee Kooxdani macluumaadka kala baxday waxa badankoda laga helay mishiinka weyn ee Xarunta Dahabshiil ku leedahay caasimadda Somaliland ee Hargeysa, kuwaas oo ay ku galeen fure sir ah (Password) oo ay ku sheegeen in uu yahay “Dahab1234’’.
Dhacdadan Sidee ayaa Warbaahinta Caalamku u baahisay?
Warbaahinta caalamka khaasatan wargeysyada ayaa Maalmihii u dambeeyay faaqidayay weerarka Anonymous ku qaaday Dahabshiil, kuwaas oo ay ku tilmaameen qawlaysato nafta u keenay dawladdaha dunidda.
Wargeyska IWIRE oo Dalka Australia ka caan ah ayaa boggiisa hore ku soo qaatay sawir laba qof oo madaxa qarsaday iyo calaamadda Dahabshiil oo hoosta ay kaga dhejiyeen, waxaanay warkooda cinwaan uga dhigeen “Anonymous oo dagaal cabsi leh ku qaaday shariikado ka hawl galla dalalka Beriga dhexe”.
Wargeyska The Times of India ayaa isaguna shalay Boggiisa 1aad ku daabcay arrintan isagoo cinwaan far waaweyn ku qoray “Anonymous oo ku dhawaaqday dagaal ay ku qaadayso Argagixisada” Wargeysku wuxuu soo xigtay warbixinta ay kooxda Anonymous ku daabaceen boggagooda internet-ka ee ay ugu hanjabayaan Dahabshiil.
Wargeyska Truth drive oo ka soo baxa dalka Singapore waxa uu wax ka qoray arrintan isagoo cinwaan uga dhigay “Kooxda Anonymous oo ku dhawaaqday dagaal ay ku qaadayso Argagixisada”.
Waxaa sidoo kale arrintan laga sii daayey Telefishanadda Bloomberg ee saldhigiisu yahay magaalada New York iyo Idaacadda Kent Business Radio oo saldhigeedu yahay dalka Ingiriiska.
Dhinaca kale Weerarkan ayay badiba warbaahinta afka Soomaaliga ku hadashaa, khaasatan kuwa Somaliland ka gaabsatay inay wax ka qoraan sababo la xidhiidha arrimo dhinaca dhaqaalaha ah oo ay shirkaddu ku naas nuujiso awgeed, marka laga reebo hay’addo warbaahineed oo faro ku tiris ah oo daabacay dhacdadan. iyada oo ugu hanjabtay inay sharciga la tiigsan doonto, Su’aashu waxay tahay sharcigu ma qabanayaa warbaahinta caalamiga ah ee seddexdii maalmihii la soo dhaafay wax faaqidayay arrintan.
“Horta Gaadmo iskumaynu ogayne waad i gaadeen, Warkiin-na waan la Socday”-Saleebaan-Gaal oo Ka Qosliyay Dadkii soo Dhaweeyay →